Inguqulo 0.9.8.0 – Welcome Yandex
Okthoba 28, 2015 by okunikezwayo 1 Amazwana
Kukhona more emhlabeni kuka nje Google Play, kukhona futhi more emhlabeni kuka nje Bing Humusha, ngokusobala ~ million 150 baseRussia nazo ukwenza izinto ezinkulu, kanye Yandex, ethandwa kakhulu search engine in Russia.
Yandex isekela izilimi eziningi futhi ikhiqiza imiphumela ehlukile kunabanye izinjini, liphinde ngokukhethekile izilimi ezikhulunywa ngaphakathi Russia ezifana Bashkir, Zulu and Tatar. Esasiyisebenzisa manje bakwazi ukwengeza uhlu izilimi, okwenza inani asekelwa ngezilimi auto-kuhunyushwa ephezulu 95!
Ukwengeza Yandex futhi kwabangela washintsha ngendlela thina phaka auto izinguqulo, ngakho manje kungenzeka ukusetha preference injini translation ongathanda ukuyisebenzisa.
Sasiqhuba eziningi (futhi sisho ABANINGI) izimbungulu fixed kule release, the log ushintsho uzokunika zizwakale kahle yalesi:
Yandex umhumushi support wanezela
Kungezwe the ukukhetha abahumushi ayethanda oda nge Hudula bese uphonsa
Misa bug esibucayi ukuhumusha post and ukuhumusha on ashicilele
Ukulungisa e Ukukhetha ulimi UI (Amagama ulimi long)
Fix translation lengxoxo ukulayisha chofoza lokuqala
Ayisekho adalule keys Google ngaphandle
Lungisa izinguqulo ehlanzekile othomathikhi ithebhu utils
Ukusekela Bashkir, Kyrghiz futhi Tatar sibonga Yandex – Manje ekusekeleni 95 Izilimi!
Kungezwe Swahili usekela Bing
Ukwehla isikhathi ukulinda phakathi izikhala in ukuhumusha lonke ukuba 2 imizuzwana
Lungisa wokunqamulela lapho evala a <p> tag
Lungisa WP_Widget deprecation call for wordpress 4.3
Fix Minor for buddypress search ukuhlanganiswa
Lungisa Kwezinye izimo lapho https url ngeke sitlolwe
Fix ubhale support for izilimi ezintathu incwadi (CEB okwamanje kuphela)
Okthoba 28, 2015 at 12:25 at the